PTUZ Inoti Varairidzi Vachenge Vachishanda Zuva Rimwe Chete paSvondo
Ndira 21, 2020
Sangano rinomiririra varairidzi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ), rinoti mari yakapiwa vashandi vehurumende senzira yekuvabatsira, yakatopera isati yatambirwa mushure mekunge hurumende yakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari.
Mutungamiri wesangano iri, Doctor Takavafira Zhou, vaudza Studio7 kuti varairidzi vari musangano ravo vachange vachingoshanda zuva rimwe chete, reMuvhuro, pasvondo kusvika nyaya yemihoro yevarairidzi yagadziriswa.
Doctor Zhou vashora gurukota rinoona nezvevashandi, Muzvinafundo Paul Mavhima, pamwe chete negurukota rinoona nezvemari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, vachiti havasi kumboteerera zviri kutaurwa nevashandi.
Studio7 haina kukwanisa kubata makurukota aya kuti tinzwe divi ravo.
Vamwe Varairidzi Vorwara nePfungwa neKusamira Zvakanaka kweZvinhu muNyika
Nhengo dzeMDC Alliance Dzobatsira Shirikadzi Dziri muHupoteri kuBotswana
Vagari vekwaMutare Vochema Chema neKukwidzwa kweMitero muBhajeti reKanzuru
Charova Sei Chando? Meya weKariba Obatsirwa neChikafu neWFP